Knowledge Archives - Page2of 67 - Today News
ဇနီးဖြစ်သူဆွမ်းလောင်းလျှင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကုသိုလ်ထပ်တူရ မရ ?
ပစ္စည်းဥစ္စာ သူရှာသော်လည်း ဇနီးဖြစ်သူဆွမ်းလောင်းလျှင် ခင်ပွန်းကုသိုလ် ရမရ ဇနီးဖြစ်သူဆွမ်းလောင်းလျှင် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ကုသိုလ်ထပ်တူရပါသလား? ” မရပါဘူး “အမျိုးသားတွေ အထူးသတိပြုစရာ ကောင်းတဲ့ အချက်ပါပဲလို့ စာမှာ ဆိုပါတယ်။ အချို့ကတော့ ယောင်္ကျားဖြစ်သူ ရှာထားတဲ့ ပစ္စည်းနဲ့
အဝေးရောက်နေချိန်မှာ ဖောက်ပြန်တတ်တဲ့ယောက်ျားကို ပညာပြလိုက်တဲ့မိန်းမဖြစ်သူ
မိန်းမဖြစ်သူကကျောင်းဆရာမဖြစ်တော့ တာဝန်ကျရာနယ်မြေဒေသမှာ တာဝန်ထမ်းဆောင်ရတယ်။ အိမ်မှာယောက်ျားတစ်ယောက်ပဲကျန်ခဲ့တယ်။ သားသမီးကမရှိ စားဖို့သောက်ဖို့ ချက်ပြုတ်ဖို့ကပြသနာ မကြီးလှပေမယ့် အဝတ်လျှော်နဲ့အိမ်သန့်ရှင်းရေးက ပြသနာရှိလာတော့ ယောက်ျားဖြစ်သူက အိမ်ဖော်တစ်ယောက်ခေါ်လိုက်မယ်ဆိုပြီး အိမ်ဖော်ခေါ်ထားလိုက်တယ်။ တာဝန်ကျရာမြို့မှ ကျောင်းပိတ်ရက် အိမ်ကိုပြန်ရောက်လာသော အခါ သူ့ယောက်ျားကိုမိန်းမဖြစ်သူဆရာမက ”
လျှပ်စစ်ဗို့အား ၃၀၀ ကနေ ၆၅၀ ထိ ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ တောင်အမေရိကရှိ လျှပ်စစ်ငါးရှဥ့်များ
လျှပ်စစ်ဗို့အား ၃၀၀ ကနေ ၆၅၀ ထိ ထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ လျှပ်စစ်ငါးရှဥ့်များ လျှပ်စစ်ငါးရှဥ့်တွေဟာ Electrophorus Electricus မျိုးစိတ်ထဲကဖြစ်ပြီး တောင်အမေရိက ရေချိုဒေသတွေမှာ နေထိုင်ကြပြီး ရှည်ရှည်မျောမျောခန္ဓာကိုယ်နဲ့ အကြေးခွံမပါဘဲ အညိုရောင်ဘက်သန်းတဲ့ အရောင်ရှိပါတယ်။ လျှပ်စစ်ငါးရှဥ့်တစ်ကောင်ဟာ
အိမ်သာသုံးစက္ကူတွေ မပေါ်သေးခင်တုန်းက ဘယ်လိုအရာဝတ္ထုတွေနဲ့ လူတွေ အသုံးပြုခဲ့ကြလဲဆိုတာ
ယနေ့ခေတ်မှာ အသုံးပြုနေကြတဲ့ အိမ်သာသုံး စက္ကူတွေကို လွန်ခဲ့သော ၁၄ ရာစုနှစ်လောက်က တရုတ်လူမျိုးတွေက စတင် ဖန်တီးခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အနောက်ကမ္ဘာခြမ်းမှာတော့ ၁၈၀၀ ခုနှစ် အလယ်လောက်မှသာ အသုံးပြုလာကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ အခုလိုမျိုး အိမ်သာသုံး စက္ကူတွေ မပေါ်သေးခင်တုန်းက
အမေအိုကြီးရောင်းတဲ့ တောကြက်ဥ (မနက်ခင်းတစ်ရက် ဆိုင်ခင်းနေစဉ် ဈေးရောင်းရန် နေရာလိုက်ရှာနေသော အမေကြီးတစ်ယောက် ဆိုင်ရှေ့ရောက်လာသည်)
အမေအိုကြီးရောင်းတဲ့ တောကြက်ဥ သူတို့အထည်ဆိုင်နားတွင် ကြက်ဥရောင်းသော အမေကြီးတစ်ဦးရှိသည်။ ဇနီးဖြစ်သူ က အထည်ဆိုင်ဖွင့်ထားပြီး ရောင်းချနေသောနေရာကား ယာယီဈေးဟုပြောရမည်။ ယာယီဆိုပေသည့် ၁၅နှစ်ခန့်ရှိပြီ။ လမ်းမကြီးမှ ဖဲ့ဆင်းသော လမ်းတစ်လမ်းကိုအမှီပြုလျက် တည်ခင်းရောင်းချသော ကျုးကျော် ဈေးဟု ကင်ပွန်းတပ်၍ ရစကောင်းသည်။
ကိုရီးယားမလေးတွေ ပြောပြတဲ့ မျက်နှာကို ပါးလျတဲ့ပုံပေါ်စေဖို့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ပစ္စည်းများ
သင့်ရဲ့မျက်နှာကို သွယ်သွယ်လေးဖြစ်စေဖို့ ခွဲစိတ်ပြုပြင်ဖို့ မလိုပါဘူးနော်။ အလှအပ အဆင်တန်ဆာတွေနဲ့ပဲ မျက်နှာသွယ်သွယ်လေး ဖန်တီးယူလို့ရပါတယ်။ ကိုရီးယားမလေးတွေ အကြံပေးထားတဲ့ မျက်နှာကို ပါးလျတဲ့ပုံပေါ်စေဖို့ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ accessories လေးတွေကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ နားဆွဲထူထူလေးတွေ မီးဆိုင်းတွေလို
ဂတ်စ်မီးဖိုကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် မဖြစ်မနေသတိထားသင့်တဲ့ အချက်( ၁၃ )ချက်
ဂတ်စ်မီးဖိုကို အန္တရာယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် မဖြစ်မနေသတိထားသင့်တဲ့ အချက်( ၁၃ )ချက် ယနေ့အချိန်အခါမှာ မြန်မာပြည်အရပ်ရပ်ရှိ နေအိမ်များ၊ တိုက် ခန်းများ၊ စားသောက်ဆိုင်တွေမှာ ဂတ်စ်မီးဖိုကို တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုလာကြတယ်။ ဂတ်စ်မီးဖိုကို လုံခြုံစိတ်ချစွာ အန္တရာယ်ကင်းစွာ အသုံးပြုနိုင်ဖို့အတွက် သတိထားသင့်တဲ့
ကလေးတွေရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး မိဘတွေအနေနဲ့ပြုမူပြောဆိုသင့်တဲ့ အချက်လေးတွေ
မိဘ အတော်များများက သူတို့ရဲ့ကလေးတွေကို အမှတ်ကောင်းကောင်းရဖို့နဲ့ ဂုဏ်သတင်း ကျော်ကြားတဲ့ တက္ကသိုလ်တွေကိုပဲ တက်စေချင်ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် သူတို့တွေဟာ ကလေးတွေရဲ့ EQ ကို လျစ်လျူရှုထားလေ့ ရှိပါတယ်။ တကယ်တော့ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာ တိုးတက်ပြီး ခိုင်မာနေတာက အလုပ်တိုင်းမှာ
ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ထူးခြားစွာအသက်ရှင်နေထိုင်ကြတဲ့ တိရစ္ဆာန်များ
ပုံမှန်မဟုတ်ဘဲ ထူးခြားစွာအသက်ရှင်နေထိုင်ကြတဲ့ တိရစ္ဆာန်များ ပရိသတ်ကြီးလဲ တစ်ခါတစ်ရံမှာ အဲ့လိုမျိုး ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ကောင်တွေ တွေ့ဖူးကြမှာပါ။ သူတို့တွေကဘယ်လိုဖြစ်လာလဲဆိုတာကတော့ သက်ရှိမျိုးစိတ်မွေးဖားတဲ့စနစ်မှာ အနည်းငယ် ဖြစ်လေ့ဖြစ်ထ မရှိတဲ့ အရာတွေပေါ်လာသောကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ခုဖော်ပြသွားတဲ့ ကောင်တွေကတော့ တကယ့်ကို ပုံမှန်မဟုတ်ပဲ
ပုဂံရာဇ၀င်ထဲက ရှမ်းမင်းသမီးလေးစောမွန်လှရဲ့ ရာဇ၀င်
မောနယ်မင်းသမီး နန်းသက် _ c. 1040s1058 ပုဂံပြည်မြောက်နန်းမတော်မိဖုရား#နန်းသက် _ c. ၁၀၅၈၁၀၇၁# ရှေ့မင်းဆက် _ မြောက်ပြင်သည်#ဆက်ခံသူ _ မဏိစန္ဒာ#မွေးဖွား ၁၀၄၀ ဆယ်စုနှစ်စယ်လန့်ရွာ၊ မောရှမ်းပြည်နယ်#ကွယ်လွန် _ သီပေါ#အိမ်ထောင်ဖက် _